BEHIND HERES BEHIND တုံ့ပြန်မှုနှင့်မှတ်စုများသည်သင်အဆုံးသတ်သွားသည်ကိုသင်ကြည့်ပြီးနောက် - သတင်း
ယခုတွင်၎င်းကိုသင်လုပ်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ရှိပြီ။ ဤနေရာတွင်သူမ၏မျက်လုံးများနောက်ကွယ်မှနောက်ထပ် ၃၁ ခုရှိသည်
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကငါအချို့၏ roundup ကိုပြု၏ Netflix ရှိ Behind Her Eyes အကြောင်းအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုနှင့်မှတ်စုများ ။ ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါတို့အားလုံးရဲ့ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာငါတို့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ငရဲမှာအရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့အချိန်အနည်းငယ်ရှိခဲ့လို့ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အာဒံအနည်းငယ်သာ၊ ရော့အားမုန်းတီးခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သောပရမ်းပတာဖြစ်မှုများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးစီးပွားကိုမျှဝေခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဒါဝိဒ်သည်သူ့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများကိုလုံးဝမသိကြောင်းမှတ်မိရန်ကျွန်ုပ်တို့တစ်မိနစ်မျှကြာသည်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်အတွက်အများကြီးယူသည်။
Netflix မှာ Behind Her Eyes မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြင်းထန်သည့်လူအားလုံးအပေါ်အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုမှာဤတွင်သာဖြစ်သည်။ ထိုင်ခုံကိုယူပြီးခံစားပါ။
၁။ အာဒံထံမှမည်သူမဆိုကြားဖူးပါသလား ???
ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကိစ္စကိုအမှန်တကယ်စိတ်ပူခဲ့တယ် #BehindHerEyes pic.twitter.com/YLnpltZiTY
- Hayley✨ (@hayleysoen) ဖေဖော်ဝါရီလ 26, 2021
iseရာမအနီရောင်အလံကြီးများနောက်တွင် Louise သည်သူမ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခဲ့သည် #BehindHerEyes pic.twitter.com/e75c40LLOG
- ဂျေ (Queen88548 @) ဖေဖော်ဝါရီလ 28, 2021
ငါရော့နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်အထိဂျိုးအရူးလို့ထင်ခဲ့တယ် #BehindHerEyes pic.twitter.com/Pe0Hcs4AFL
တစ်ဦးဆေးညွှန်းမပါဘဲ adderall ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
- ROSĘRUKIĘ (@ pietrose9721) ဖေဖော်ဝါရီလ 28, 2021
4. ငါ x ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်
အာဒံအတွက်ချဲ့ခြင်းအပေါ် 12am ဆုတောင်းပဌနာ session တစ်ခု
စကားဝှက်ကိုတွေ့ဆုံရန်ကျွန်ုပ်ကို MSG ခေါ်ပါ #BehindHerEyes pic.twitter.com/QYhFVJdCZM
ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်း။ (@FAITHREINAA) ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2021
၅ ။ ဒီမှာလိမ်ညာထားတာမရှိဘူး
သူသည်အိုင်တီဆိုလို #BehindHerEyes pic.twitter.com/JfMl1c4XEp
- Vi⁷ (@namgisti) ဖေဖော်ဝါရီလ 28, 2021
Adele: ငါကြိုက်နှစ်သက်ကြဘူး, ကလိုက်တယ်ခံစားရရဲ့နောက်ကျောဖလှယ်ကြကုန်အံ့
ရော့ #BehindHerEyes pic.twitter.com/nARLIU3Uxc
- ဆာရှာ (@sashazxnt) ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2021
အလွန်ကောင်းသောလူ #BehindHerEyes pic.twitter.com/mbIuzuJRDL
- Chase (@ChaseStein_) ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2021
၈။ သူမဘာကြောင့်အကူအညီတောင်းခံရုံတင်မကဘဲ ??????
Adele ကိုကယ်ဖို့ Astral projection လုပ်ခြင်းအားဖြင့် Louise ဘာကိုအောင်မြင်မှာလဲဆိုတာတွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေသလား။ #BehindHerEyes pic.twitter.com/Imi8b61U3u
- ElleCeliaa (@ElleCeliaa) ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2021
ဒါကြောင့်မင်းကိုငါအမုန်းဆုံးဇာတ်ကောင်ကငါ့ကိုသားကောင်လို့ပြောနေတာပဲ #BehindHerEyes pic.twitter.com/INTXMmyShL
- Tessa Connelly (@ tessaconnelly7) ဖေဖော်ဝါရီလ 28, 2021
ငါသူ့ကိုရှာပြီးမွေးစားချင်တယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုမိတ်လိုက်ပြီးနောက်ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်။ #behindhereyes pic.twitter.com/d8dhskpvFP
- ဘင်ဝီဗာ (BennyW1980 @) ဖေဖော်ဝါရီလ 28, 2021
11. Ngl အာဒံအကြောင်းမစဉ်းစားတော့ပါ
သူတို့ခေါင်းများ x လည်းဆုံးရှုံးရန်အဘို့အ 12 Ah, မစောင့်နိုင်ပါ
ငါညမှာညအိပ်ပုံ #BehindHerEyes ငါသိသူတိုင်း pic.twitter.com/Ypp6jQUD5y
- ဂျဲနီစိန့်ကွမ် (@Bialele_) ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2021
သငျသညျနားလည်သဘောပေါက်လာသောအခါ Adele က Louise ကိုမှတ်စုစာအုပ်ပေးခဲ့တယ် #BehindHerEyes pic.twitter.com/UJ1LyDvMOG
- ဂျဲနက် (@Itz_Jeanette) ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2021
14. Looool သူအခွင့်အလမ်းမခံမရပ်
ရော့ရဲ့ငါသေပြီငါအမျိုးအစား4ဆံပင်ဂရုစိုက်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန် YouTube ကိုသွားကြဖို့ရှိသည်။ #BehindHerEyes
- ဟင်နရီ (@HenrieVIII) ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2021
'သင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကိုမထား' 'ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်လျှင်။ #BehindHerEyes pic.twitter.com/vItZYHm6HF
- အဲလက်စ် (triplayyyyy) ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2021
စောင့်ကြည့်ပြီးနောက်စိတ် #BehindHerEyes pic.twitter.com/7yq3IRfOZQ
- Aimée🧃 (@Aimeetd) ဖေဖော်ဝါရီလ 24, 2021
ငါရော့နဲ့ Adele ရဲ့အရောင်တွေကိုကြည့်သင့်သည်။ သူမရဲ့ခရမ်းရောင်သည် !! #BehindHerEyes pic.twitter.com/fwzROt6ssh
- ပူပြင်းသည့်လူကြမ်း (@lasolodrista) ဖေဖော်ဝါရီလ 22, 2021
19. ငါ၏အ core ကို = ခါ
ကြောင်းအဆုံးသတ် process ဖို့ငါ့ကိုအနည်းဆုံး 3-5 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းယူမယ့်ပါတယ် #BehindHerEyes #Netflix pic.twitter.com/IopDwF5wWs
- အသေးအဖွဲဘက်တီ (@ghost_realtor) ဖေဖော်ဝါရီလ 24, 2021
ငါဘာကိုတွေ့ခဲ့တာလဲ ??? ရော့သည် MF ရွာသားတစ် ဦး ဖြစ်သလော။ ငါဤကဲ့သို့သောကြံစည်မှုတစ်ခါမျှမတွေ့ရပါဘူး။ ကျနော်တို့ David ကယ်ဖို့လိုအပ် !! !! ။ ငါအဆုံးသတ် fr ကိုမြင်ပြီးနောက်ကုထုံးလိုအပ်ပါတယ် #BehindHerEyes pic.twitter.com/maZmSmx5Ki
- sindisbiya (sindisbiiyaa) ဖေဖော်ဝါရီလ 23, 2021
ငါနေဆဲစဉ်းစားတယ် #BehindHerEyes ငါ့ခေါင်းကိုဒီ shit မထုတ်နိုင်ဘူး ဒါဟာအလေးအနက်ထားအနာကျင်ဆုံးပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် .. Netflix ကဒီငါ့ကိုအတူငါ့ကိုတယ်။ pic.twitter.com/moWYqJfd7H
- 🦋 (@_mimixxmimi) ဖေဖော်ဝါရီလ 22, 2021
22. ငါချိုမြိန်ကောင်းကင်တမန်သည်သင်တို့အဘို့လာမယ့်တာ !!!!
အာဒမ်ကိုပြောင်းပြီးဂရုစိုက်ဖို့နက္ခတ်ဗေဒင်ဆိုင်ရာစီမံချက်ကိုသင်ယူခဲ့တယ် #BehindHerEyes pic.twitter.com/rZbF8sk27c
- Usman (@ Nassario_95) ဖေဖော်ဝါရီလ 24, 2021
၂၃။ Rob သည်သေသည်သို့မဟုတ်သေသည်ကိုသတ်မှတ်သည်
သငျသညျအကြှနျုပျကိုမလိုချင်ပါလျှင်ဤမကောင်းတဲ့အိုင်းသင်ချင်တယ် #BehindHerEyes pic.twitter.com/3ykwu3d6Sk
- Ka $ h⚠️ (@ Kah77589319) ဖေဖော်ဝါရီလ 23, 2021
Adam က 'Louise' ကသူ့ကိုခေါ်သွားတဲ့အခါ #BehindHerEyes pic.twitter.com/Bf3XKU11JK
ဒီတော့စောင့်ကြည့် Imma ငါ့ ဦး ခေါင်း၌ un- မကောင်းသောအ Adele ရဲ့မျက်နှာရန်ရှိသည် #BehindHerEyes pic.twitter.com/0bIhUkM6bc
- အမိုင်နာ (@dreamyypisces) ဖေဖော်ဝါရီလ 24, 2021
အဆုံးကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော့်ကိုတိုက်ရိုက်ရိုက်ကူးပါ #BehindHerEyes Netflix ပေါ်မှာ pic.twitter.com/DHO81K7YBi
- Hayley✨ (@hayleysoen) ဖေဖော်ဝါရီလ 23, 2021
ပထမ ဦး ဆုံးကြံစည်မှုလှည့်ကွက်ရှိ၏ထို့နောက်ရှိ၏ ကြံစည်မှု။ လှည့်ကွက် ... ..listennnnnnnn #BehindHerEyes pic.twitter.com/YmTvFqtfMf
- Sherry_Berry || YouTube: mychemistryhub (@BerriiSherrii) ဖေဖော်ဝါရီလ 25, 2021
၂၈။ လုံလောက်ပါပြီ။ ဤအရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
Louise ကသူမ jollof ဆန်ကိုဘာလို့မလုပ်တော့တာလဲဟုမေးသောအခါသူကမေးသည် #BehindHerEyes pic.twitter.com/SEXEpfPBt2
- အင်ဂျလီ (@anjali_pancholi) ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2021
စောင့်ကြည့်ပြီးနောက်ငါ့ကို #BehindHerEyes pic.twitter.com/9QaZW7uFp9
- ဇ။ (@canceledreams) ဖေဖော်ဝါရီလ 24, 2021
ဆက်လုပ်ပါ၊ ငါ့ ဦး နှောက်ကဒီအရာအားလုံးကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ဘူး
ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်သူဟာ Rob နဲ့အမြဲတမ်း Adele ရဲ့ flashbacks တွေအားလုံးထဲမှာရှိနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတကယ်တော့ရော့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကနေအစဉ်မပြတ် Adele ရဲ့ထံမှအမှုအရာကိုမြင်နေပါတယ် #BehindHerEyes #behindhereyesnetflix pic.twitter.com/48wIGYv0Ft
- Eilaf (@ Eilaf47875774) ဖေဖော်ဝါရီလ 25, 2021
- Japaneeswa (@CvuJapCawe) ဖေဖော်ဝါရီလ 25, 2021
• သူမ၏မျက်လုံးများအဆုံးသတ်နောက်ကွယ်မှရှင်းပြသည်မှာ - ဒါဆိုတကယ်ဘာဖြစ်သွားတာလဲ။